PSJTV | सेनाले मकै नछर्नू भनेको छ, हामी गरिब कसो गर्ने?
Monday 23 September 2019 | सोमबार, ०६ असोज २०७६
सेनाले मकै नछर्नू भनेको छ, हामी गरिब कसो गर्ने?
मङ्गलबार, ०५ चैत २०७५ पिएसजे न्युज
काठमाडौं : काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याक प्रभावित क्षेत्रका निजी जग्गाको मुआब्जा तोकेको ११ वर्ष भइसक्यो। तर, मकवानपुरको भीमफेदी-८ रिपे र मालगाउँका प्रभावितले अझै मुआब्जा पाएका छैनन् ।
दुई गाउँका १० परिवारले करिब ४५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामीले लेखेका छन्। मुआब्जा नपाएका स्थानीयले बस्ती नछाड्दा सो क्षेत्रमा पहिल्यै खोलिएको सर्भिस ट्र्याकबाहेक अन्य काम अघि बढेको छैन।
घरबारीको मुआब्जा नपाएका पीडित परिवार सेनाले पटक–पटक बस्ती छाड्न दिने उर्दीले झन् पीडित बनेको गुनासो गर्छन्। ‘पो’र मकै छर्ने वेलामा सेना आएर नछर्नू भने। तर, मैले मानिनँ। त्यही माटोको उब्जनीले वर्षभरि परिवारको पेट पालियो,’ रिपेकी ७३ वर्षीया क्षारामाया स्याङ्तानले वह पोखिन्, ‘अहिले फेरि मकै नछर्नू भनेको छ। न जग्गाको पैसा दिएर अन्त जाने बाटो खोलिदिन्छ, न आफ्नै जमिन खोस्रिन दिन्छ? हामी गरिब कसो गर्ने?’
१० परिवारमा अलि धेरै जग्गा भएको पनि क्षारामायाकै हो । रिपेमा पाँच रोपनी तीन आना, मालागाउँमा ६ रोपनी र इपामा दुई रोपनी खेतबारी छ । भूकम्पले भत्काएर घरविहीन बनेका रिपेकै पूर्णबहादुर घिसिङले गत वर्ष मात्रै घर उभ्याए। सरकारी अनुदानमै घर बनाएका हुन्। तर, त्यही घर छाड्न सेनाले आदेश दिएको उनले बताए । जब कि मुआब्जा हात परेको छैन।
मालगाउँकी केसरीमाया घिसिङ पनि यसपालि मकै छर्ने कि नछर्ने दोधारमा छिन् । उनलाई पनि सेनाकै आदेशले अप्ठ्यारो पारेको हो । ‘मालगाउँमा हामी पाँच घर परिवार छौँ । सबैको गरी करिब २० रोपनी जग्गा छ । जहिल्यै छाडेर जान भनेको छ । जायजेथा छाडेर रित्तै कता जानु?’ उनले भनिन् ।
फास्ट ट्र्याकको ट्र्याक रिपे र मालगाउँको बीच भएर खनिँदै छ। माथि रहेको रिपे र तलको मालगाउँको बीचबाट २५ मिटर चौडा सडक खन्दा दुवै गाउँ विस्थापित हुन्छन्। यो खण्डमा ठेक्का पाएको दिवा निर्माण सेवाका सुपरभाइजर सुवास अधिकारीले स्थानीयले बस्ती नछाडेकाले ट्र्याक खन्ने काम रोकिएको बताए।
आनीको खातामा शंकास्पद १९ करोड, छानविन रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाब!
कसरी बित्छ मुख्यमन्त्रीहरुको दिनचर्या?
अनौठो खालको पत्नीव्रता पन्छी राजधनेश ! यस्ता छन् स्वभाव
यसरी चलेको थियो दसैँमा नयाँ नोट साट्ने चलन
का‌ंग्रेस बैठक असोज १० गते
यसरी हेर्थे राजा रानीले नारायणहिटीमा सिनेमा
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का ८ निर्णय
सीपका धनी नै गरिबीको रेखामुनि किन?
7th Aug 2019 पिएसजे न्युज
बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पछिल्लो सयम कानुनी लफडामा फसेकी छन्। सोनाक्षीमाथि धोका दिएको आरोप लागेको छ। हाल सोनाक्षीको एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ। भिडियोमा सोनाक्षीका हातमा हतकडी देखिन्छ। भिडियोसँगै सामाजिक सञ्जालमा ह्यासट्याग ...
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवसँग मन्त्रालयका काम–कारबाहीसम्बन्धी विभिन्न प्रश्न गरेका छन् । बैठकमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले गुणस्तरीय खाद्यवस्तु खान पाउने संवैधानिक अधिकारअनुसार नै ...
काठमाडौं : नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको एक वर्ष बित्दानबित्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सरकार र पार्टी एकीकरण हुँदा ...